As of June ၂၀၂၁, there are 321 language editions of Wikipedia, which collectively have ၅၆၆၉၇၈၄၄ articles.
အသေးစိပ် အချက်အလက်များကို ဤတွင် List of Wikipedias ကြည့်ပါ။
၂၀ ရက် စက်တင်ဘာလ ၂၀၀၄ မှာတော့ ဝီကီပီးဒီးယားတွင် ဘာသာစကားပေါင်း ၁၀၀ ကျော် အသုံးပြုထားသော စာတမ်းပေါင်း ၁,၀၀၀,၀၀၀ အထိ ရရှိလာခဲ့သည်။
၁ ရက် မတ်လ ၂၀၀၆ မှာ အင်္ဂလိပ် ဝီကီပီးဒီးယား စာတမ်းပေါင်း ၁,၀၀၀,၀၀၀ ၉ ရက် စက်တင်ဘာလ ၂၀၀၇ မှာ အင်္ဂလိပ် ဝီကီပီးဒီးယား စာတမ်းပေါင်း ၂,၀၀၀,၀၀၀ ၁၇ ရက် ဩဂုတ်လ ၂၀၀၉ မှာ အင်္ဂလိပ် ဝီကီပီးဒီးယား စာတမ်းပေါင်း ၃,၀၀၀,၀၀၀ ၁၃ ရက် ဇူလိုင်လ ၂၀၁၂ မှာ အင်္ဂလိပ် ဝီကီပီးဒီးယား စာတမ်းပေါင်း ၄,၀၀၀,၀၀၀ ၁ ရက် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၅ မှာ အင်္ဂလိပ် ဝီကီပီးဒီးယား စာတမ်းပေါင်း ၅,၀၀၀,၀၀၀ ၂၃ ရက် ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၀ မှာ အင်္ဂလိပ် ဝီကီပီးဒီးယား စာတမ်းပေါင်း ၆,၀၀၀,၀၀၀
၂၀၀၄ တွင် ဝီကီပီးဒီးယားသည် ""Community"" အတွက် Webby ဆု နှင့် ""Digital Community"" အတွက် Prix Ars Electronica ဆု ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ တွင် Erasmus ဆုကို ဝီကီပီးဒီးယား အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလုံးအနေဖြင့် ရရှိခဲ့သည်။
↑ab cdefတချို့သော လူနည်းစု ဘာသာစကားများ အတွက် စာတမ်းများ အဆမတန်ကြီးထွားလာမှုသည် အကျိုးမရှိသော အကြောင်းအရာများကို ပေါပေါများများ ရေးထုတ်ပေးနိုင်သော အလိုလျောက် ညွန်ကြားနိုင်သော စက်ရုပ်များ အသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကို သိသာထင်ရှားသော ဥပမာများမှာ Swedish and Cebuano ဝီကီပီးဒီးယားများ ဖြစ်သည်။ ဤတွင်ကြည့်ရန် Proposals for closing Cebuano Wikipedia ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာလ.
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikipedia/my&oldid=21634948"